यसरी भएको थियो विश्वकै ठूलो पुरस्कार नोबेलको स्थापना
शान्ति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान र अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा विश्वकै ठूलो मानिने पुरस्कार हो, नोबेल पुरस्कार । सन् १९०१ देखि यो पुरस्कार दिन सुरु गरिएको हो । अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा नोबेल
जनकल्याण मा.वि.का विद्यार्थीले बनाए तिन रोवर्ट
एटम शर्मा / काठमाडौं, ३ फागुन २०७४ काठमाडौं जिल्ला स्थित जनकल्याण मा.वि. महांकालमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले रोवर्ट बनाएका छन् । कक्षा ९ मा अध्ययनरत विश्वजित श्रेष्ठ, प्रविन राई र सुजन गुवाजुले
प्रविधि तथा अन्य सुविधाका कारण मानिसहरुमा मोटोपनको समस्याले खुबै सताउन थालेको छ । भर्खरका युवाहरुको पनि अन्य सबै भाग फिट भएतापनि पेट भने पुत्लुक्क बाहिर निस्किएको हुन्छ । हुन त
करिब ३० वर्षका एक मानिस कार्यालय जाने तयारी गर्दैथिए। उनले भान्छाकोठामा प्याज राख्ने ठाउँबाट खसेको ‘एक्लो’ प्याज देखे । त्यो प्याज उनले टिपे तर राख्ने ‘उचित’ ठाउँ भेटेनन् । जता
यसरी बचाैँ यौनरोगबाट
नेपालका गाउँघरदेखि शहरी क्षेत्रसम्म सबैतिर यौन सम्पर्कको माध्यमबाट सर्ने रोग व्याप्त छ । मानिसको यौन स्वभावमा निर्भर रहने भएकाले यस्ता रोग कुनै वर्ग वा समुदायमा सीमित नरहन सक्छ । यौन
नासलद्धारा प्रकाशित ‘नासल एक झलक’ लोकार्पण
२ फागुन २०७५ काठमाण्डौ, पुस्तकालय परिचारिक संगठन नेपाल (नासल) द्धारा प्रकाशित पुस्तक “नासल एक झलक” लोकार्पण तथा विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुका लागि सूचना साक्षरतासम्बन्धी ३ दिने तालिम डा. हरि लम्सालको प्रमुख
मुस्ताङ, २ फागुन मुस्ताङमा जाडोका कारण हरेक वर्ष पुस र माघ गरी दुई महिना सम्पूर्ण विद्यालय बन्द हुने गर्छ र फागुन महिनादेखि नयाँ शैक्षिक शत्र शुरु हुने गर्छ । मुस्ताङ
बाल गृहमा पहिलो पटक कन्सर्ट
१ फागुन, २०७४ काठमाण्डौ, बाल अपाङ्ग टेवा संस्थाको प्राङ्गणमा बालबालिकाहरुलाई मनोरञ्जनका लागि गत हप्ता पहिलोपटक कन्सर्ट आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा काठमाडौँ किलर ब्रान्डले टेवाका बालबालिका तथा स्थानीयलाई रक एण्ड रोल
जन्डिस उपचारका लागि केही घरेलु उपायहरु
जौ एक मुठी जौलाई तीन लिटर पानीमा मिसाएर सानो आगोमा लामो समयसम्म तताउनुहोस् । यसरी धेरैबेरसम्म तताएको पानीलाई बारम्बार पिउनुहोस । उमालेको जौ पानी जन्डिस उपचारका लागि सही तरिका सक्छ
अचानक तौल घट्नु कहिले कहिं तौल घटबढ हुन्छ । खानपान, शारीरिक क्रिया आदिले गर्दा तौल घट्ने र बढ्ने हुनु स्वभाविक हो । तर, बिना कारण निरन्तर तौल घट्यो भने यो
यस कारण ! धेरै चिसो पानी पिउनु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक
१. पाइल्स चिसो पानीले मललाई जमाउने काम गर्छ । यसकारण पाचनप्रणालीमा यसले समस्या पैदा गर्ने काम गर्छ । मललाई राम्रोसँग नसर्दा शरिरले स्वस्थ भएको अनुभव गर्न पाउँदैन । यसैका कारण
हड्डी कमजोर बनाउने वा बलियो आफ्नै बानीमा निर्भर : फिजियोथेरापिस्ट डा. गितेश
स्वस्थ हुनका लागि हड्डी बलियो हुन निकै आवश्यक छ । उमेर बढेसँगै हड्डीलाई स्वस्थ राख्नका लागि सही खानपिनका साथै जीवनशैली पनि स्वस्थ हुनुपर्छ । तर थुप्रै मानिसहरु नियमित रुपमा जानी